စက်တင်ဘာ (၈) ရက်နေ့မှ စ၍ မဲဆွယ် စည်းရုံးနိုင်ပြီ | National Enlightenment Institute (NEI)
Professionalism - Inclusiveness - Pioneering
စက်တင်ဘာ (၈) ရက်နေ့မှ စ၍ မဲဆွယ် စည်းရုံးနိုင်ပြီ
မော်လမြိုင်၊ စက်တင်ဘာ ၈ ၊ ၂၀၂၀ ။
နိုင်ငံရေး ပါတီ ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများနှင့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနေဖြင့် ယနေ့ စက်တင်ဘာ (၈) ရက်နေ့မှ စတင်၍ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး စတင် လုပ်ဆောင် နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ၂၀၂၀ ၊ စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့သည်။
လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနေဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကာလကို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ရက်ပေါင်း (၆၀) အလို ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့ အထိ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး လုပ်ဆောင် နိုင်ကြောင်း ထိုကြေငြာချက်၌ ထပ်မံ ဖော်ပြထားသည်။
လွှတ်တော် အသီးသီး တို့တွင် ဝင်ရောက်အရွေးကောက် ခံကြမည့် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ၏ အတည်ပြု စာရင်းများကိုလည်း ပြီးခဲ့သည့် ဩဂုတ်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ များမှ ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
လာမည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပရန် လျာထားပြီး ဖြစ်ကာ၊ ထိုရွေးကောက်ပွဲအား မွန်ပြည်နယ် တစ်ပြည်နယ်လုံး အတိုင်းအတာ အနေဖြင့် ပါတီပေါင်း (၁၇) ခုတို့မှ ၎င်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တဝန်းလုံးမှ နိုင်ငံရေး ပါတီပေါင်း (၉၂) ခုတို့မှ ၎င်း အသီးသီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
လာမည့် (၈/၁၁/၂၀၂၀) တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရ တတိယ အကြိမ်မြောက် ကျင်းပသည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သည်။
(၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအား အတည်ပြုပြီးနောက် ယင်းဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၇/၁၁/၂၀၁၀) တွင် တစ်ကြိမ်၊ (၈/၁၁/၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
© 2015-2020 National Enlightenment Institute, Myanmar. All rights reserved. Web Design by NetScriper